အမိမြေသို့ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း: April 2010
ချစ်သော သမီးသို့မွေးနေ့ လက်ဆောင်
သင်္ကြန် မိုးပြေးနဲ့ အတူ..
ပိတောက်ဝါပွင့်တွေ နဲ့ အတူ
လူ့ ဘ၀ထဲ ရောက်ခဲ့တဲ့ သမီး..
ပျော်ရွှင်.မွေးနေ့ ပွဲ နွှဲနေတော့မလား
သြကာသ ရှစ်ခိုး ဦးခိုက်နေမလား..
သမီး လက်နဲ့ ကိုယ်တိုင် ချနေမလား..
အဖေနဲ့ အမေကို ရည်စူး.
အသံစူးစူးလေး နဲ့ အမျှဝေနေမလား..
အမေတူ မျက်လုံးလေးတွေနဲ့ 
ဆံသွယ်လေးတွေ ခွေနွဲ့ ..
ဖြူစင်ဆုံး နှလုံးသား.နဲ့ သမီးရယ်.
စိတ်နှလုံးသား ညစ်ပတ်မပေစေပါနဲ့ 
မျိုးရိုးမိဘ၏ ဂုဏ်သိက္ခာ သမီး စောင့်ရှောက်ပေးပါ။
အဖေ အမေဆီက လက်ဆောင်မပါလို့ 
အဖေ ပေးတဲ့ ဥာဏ်ပညာ ဦးနှောက်လက်ဆောင်
သမီး အာရုံ ငါးပါးမှာ လွှမ်းခြုံ လက်နက်..
အမှားနဲ့အမှန် ပိုင်းဖြတ်ရဲတဲ့ ယုံကြည်ချက်
အမေပေးတဲ့ သတ္တိ သွေးလက်ဆောင်
သမီး နှလုံးသားမှာ နီရဲစွာစီးဆင်းလျှက်..
မတရား အမိန့် အာဏာ ခေါင်းငုံမခံမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်
ဘ၀များ စတေးထားတဲ့အဖေ နဲ့အမေ..
သမီးရယ် လေပြေတွေထဲမှာ ကြားပါ…
ဟိုးရှေးရှေးက ဗိုလ်ချူပ် အောင်ဆန်း ဆိုတဲ့သူမှာ..
အောင်ဆန်းစုကြည် ဆိုသူ သမီးလေးရှိတယ်..
သူက အဖေ့ ခြေရာနင်းတယ်..
ဖြူနေခြည်မင်းယု ဆိုသူ သမီးလေးရှိတယ်..
သူလည်းလေ အဖေ့ ခြေရာနင်းမဲ့သမီးလေးပါ..
အဖေ့ မျက်နှာကို သမီး မမှတ်မိပေမဲ့ 
သမီးအနားမှာ အမေ မနေနိုင်ပေမဲ့ 
အမေ့ ရဲ မေတ္တာကို.သမီး သတိရပါ။
တနေ့ နေ့ ပြန်တွေ့ မှာ အသေအချာသမီး..
မျှော်လင့်ချက် အပြည့်နဲ့သမီးယုံကြည်
သုံးတိုင်သော မွေးနေ့ကိတ်ပေါ်က ဖယောင်းတိုင်..
“ အဖေ အမေနဲ့ သမီး အမြန်ပြန်နေပါရစေတော့ ”
မသဒ္ဓါ ( ၄။၁၂။ ၂၀၁၀)
ဖေဖေ ဦးဂျင်မီ ( ဦးကျော်မင်းယု ကိုယ်စား ) သမီးလေးငယ် ဖြူနေခြည် မင်းယု ၏ ဧပြီ ၁၂ ရက်တွင် ကျရောက်သော (၃ ) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ အတွက် မွေးနေ့ လက်ဆောင်..
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 1:24 AM 1 comments Links to this post
စိတ်ဓါတ်သာရှိပစေ ..ပြောင်းလဲဖို့ ၂၄ နာရီဘဲလိုတယ်.
အဖေက ကျဆုံး..အမေက တာဝန်အရ..
ပြည်ပမှာ ကြီးရတာမို့ 
ခင်ပွန်းလင် တယောက်လုံး ဆုံးတာတောင်
ရိုးသားကြည်လင် ပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုဘ၀
ရဲဝံ့သော အာဇာနည်..အမေသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်..
လုံခြုံရာ အေးရိပ် ရှာဖွေခဲ့သူများ
ကျောက်ကပ်ကလီဇာထုတ် ရောင်းစား အသတ်ခံရ..
ကလေးငယ်တွေ ကျွန်ရောင်းဝယ် ခံရ..
ဒါ ဒို့အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိသည်။
ဘာ အနောက်လည်း မျှော်ရသည်မဟုတ်..
ဘာ အရှေ့ လည်း လက်ယပ်ခေါ်သည်မဟုတ်.
ခွေးလို ဘ၀..တောင်ဘက် လည်း မပြေးသာ..
ဒို့ တွေ မြန်မာအစစ်မှဟုတ်ကြသေးရဲ့လား..
ဒို့ တွေ ဗုဒ္ဓဘာသာ အစစ်မှဟုတ်ကြသေးရဲ့လား..
ဆင်သေကို ဖုံးနေတဲ့ ဆိတ်သားရေ..
ဘယ်သူမှ အမိမြေက မခွါလိုဘူး..
မြန်မာတွေ တချိန်ကရောင်ရှိန်မြင့်တာ ပုံပြင်သာသာ..
အာရှရဲ့ မွဲပြာကျကြွက်..ဒါ ငါတို့ ရဲ့လက်ထက်..
ငါတို့ အဖိုးတွေ တော်လှန်တာ ကျွန်ပညာရေး..
ပိုးပုဆိုးဝတ် ရုံးတက်နိုင်ခဲ့တာ..ဒို့ မြန်မာ..
ဘော်လီတောင် ရွှေကြိူးတတ် ၀တ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဒို့ မြန်မာ
ဖိုးစိန်လို ဇာတ်မင်းသား ရွှေဒဂါးပြားဆုချနိုင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ.
ရှေ့ နေ မောင်သောင်းဖေ ပြည်တော်ပြန်ခဲ့တာ ဒို့ မြန်မာ..
ကျမ တို့ လက်ထက်ကျ ပြန်ရက်မရှိ..
သေတောင် အရိုးဘ၀သာ ပြန်ရမည့်ဘ၀တွေ..
၂၄ နာရီ မရှိတရှိမှာ..ဖြုတ်ချနိုင်တာ
ကီရစ်ကစ္စတန်နိုင်ငံ (Kyrgyzstan) အစိုးရ..
ဒို့တတွေ ဥပမာ ယူကြရအောင်။
မသဒ္ဓါ ( ၄။၁၀။၂၀၁၀)
ယခင် ရွှေဝါရောင်အရေးအခင်း...ယခု ကီရစ်ကစ္စတန်နိုင်ငံ (သို.) အကြမ်းမဖက်သော်လည်း လက်တုံ့ပြန်ခြင်း
ကီရစ်ကစ္စတန်နိုင်ငံ (Kyrgyzstan) ပြင်းထန်တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေကြောင့် လက်ရှိအစိုးရပြုတ်ကျကာ ကြားဖြတ်အစိုးရ တက်လာပြီး အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေက ၆ လ အတွင်း ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပေးသွားမယ်လို့ ကြေညာလိုက်ပါပြီ....
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 9:06 PM0comments Links to this post
သူ့ သားပါဆို လုခဲ့..
အရမ်း ပတမ်း ဆွဲလု.
ကြောက်လို့ ရယ် မဟုတ်ဖူး..
မင်းတို့ ..ဒို့ တောင်းနေကြ တဲ့ ဒီမိုကရေစီ..
သင်သည်သာ မင်းမဟော်သဓာ ပေါ့...
အမှန်တရားအတွက် သင် သက်သေရပ်ပါလော့
မသဒ္ဓါ သည် အမေလော..ဘီလူးမလော..
သူယုတ် သူမ ဘယ်သူလဲ။
မသဒ္ဓါ (၄။ ၉။၂၀၁၀)
မသဒ္ဓါ ဒီနေရာ မှာ အေးဆေးစွာ..အမှန်တရားအတွက်ကဗျာ..အာဇာနည်များအတွက် ဂုဏ်ပြုကဗျာရေးပါသည်။ ဘယ်သူကြိုက်ကြိ်ုက် မကြိုက်ကြိုက်..ကိစ္စ အလျှဉ်းမရှိ..
Google မှ အလကားရသော ဘလောက်အား တန်ဖိုးရှိသော အချိန်များမြှုပ်နှံ၍ ငွေအဿပြာ တပြားမှ မယူ ရေးနေသည် မှာ ၂ နှစ်ကျော်ရှိပါပြီ..
နိုင်ငံကို လူမြင်သူမြင်..သူအထင်ရှား အသက်စွန့် သူများ ရှိသကဲ့သို့ ..လူမသိသူမသိ သမန်ကာရှန်ကာဖြင့် အသက်ပေးသူ များရှိနေသည် ရှိနေသေးမည်ကို မည်သူမှ မညင်းနိုင်ပါ.။
အာဇာနည်ဆိုသည်မှာ..မည်သူကို ခေါ်ပါသနည်း..သေမှ အာဇာနည် မည်သည်လား..မသေဘဲ အာဇာနည်မမည် နိုင်ဖူးလား..လူသိမှာ အာဇာနည်လား လူမသိရင်ကော အာဇာနည် မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလား။
ပါးစပ်ကအော်တိုင်း မိမိ အာဇာနည်ဖြစ်သည် မဟုတ်.. မိမိဘာလုပ်သည် သမိုင်းမှာကျန်ရစ်သည်။ မိမိ မည်သို့ စေတနာရှိသည် မိမိ ဖာသာသိသည်။ ဤ အာဇာနည်များ အတွက် မသဒ္ဓါ ကဗျာရေးပါသည်.။
လူတဦး၏ နိူင်ငံကို အသက်စွန့်ရခြင်း သတင်းသည် သတင်းသမားများမှ ...သတင်းအဖြစ်ဖော်ပြပြီး.. နောက်မကြာခင် ထပ်ထွက်သော...သတင်းအသစ် များကြားထဲတွင် တိမ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်သွားမြဲဖြစ်သည်.။..
လူ၏ အသက်တချောင်း နာကြင်မှူ ဆုံးရှူံးမှူသည် သတင်းတပုဒ် အဖြစ် လေမှာဘဲ လွင့်မြောသွားပါသလား။ .သူ၏ အသက်တန်ဖိုးသည် ဒီလောက်ဘဲ အဖိုးထိုက်တန်ပါသလား..ဒီထက် ပို၍ မခြီးမြှောက်သင့်ပါသလား..
ဤအာဇာနည်၏ မိသားစု တကွဲတပြားဖြစ်မှု.မိတဆိုး ဖတဆိုးဖြစ်မှု.နာကြင်ပူဆွေး..ငိုကြွေးသော မျက်ရည်.များ ဖေးကူ တွဲမ မခြောက်စေသင့်ဖူးလား
ဤသည့်နောက်ဆက်တွဲများကို သတင်းသမားများ မစဉ်းစားကြပါသလော..
မသဒ္ဓါ ကတော့ စဉ်းစားပါသည်. မိမိ၏ ဖခင် မောင် အကို သားတို့နိုင်ငံအတွက် စွန့် လွှတ်သွားသည်ကို ကြေကွဲသော ဆွေမျိုးသားချင်းများသို့အကြင်နာ အားပေးစာ ရေးပါ သည်။ နောင် အနှစ် ကြာသည်အထ်ိ အမှတ်တရ..တစုတစည်း..တနေရာထဲတွင်ထားခဲ့ရန်..
.အမှတ်တရ အညတရ အာဇာနည်များ၏ သချိုင်းကျောက်စာ...ဒါ မသဒ္ဓါ ကဗျာ၏ အစမူလ ရည်ရွယ်ချက် ဖြစ်ပါသည်။
မိမိ၏ ခံယူချက်ခံစားချက်ကို..ရေးသားရာတွင် အကြောင်းအရာ အချက်အလက် မမှားယွင်းရလေအောင်.. ရေးရသည်မှာ မည်မျှခက်ခဲကြောင်း..ရေးဖူးသူတိုင်းသ်ိပါသည်။
သတင်းတပုဒ် ကို ကြားရုံနှင့် လူအများစု သတင်း ရေးနိုင်ကြမည် ဖြစ်သော်လည်း..သုတ ပါသော ခံစားချက်.. ရသစာပေဖန်တီးရခြင်းက ပိုမို ခက်ခဲပါသည်။
စာတကြောင်းရေးရာတွင်..ရေးသူ၏ အမည်သည် အလွန် အရေးကြီး ပါသည်။ ဤသည်မှာ နာမည်ကြီးချင်၍ မဟုတ်။ ကျော်ကြားလို၍မဟုတ်။ တစုံတခု မှားယွင်းပါက ရေးသူက တာဝန်ခံရသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်.။ မုန့် ဝေရန် မဟုတ်ပါ။ ဒုတ်ဝေရန် ဖြစ်ပါသည်။
မသဒ္ဓါ စရေးသည့် အချိန်မှစ၍ မသဒ္ဓါ ၏ ကဗျာများကို နှစ်သက်သော သူများမှ သူတို့ ၏ ဘလော့များတွင် တင်ပြ ယူသုံးကြပါသည်.။ အချို့ ကလည်း လေးစားစွာဖြင့် လာရောက် ခွင့်တောင်းပြီးမှ ယူသကဲ့သို့ ..တချို့ က လည်း..သူမသိ..ကိုယ်မသိ..ဒီလိုဘဲ ကြုံသလို ယူသုံးကြ သည် များ လည်း ရှိ်ပါသည်။ လူကြီးပီပီ..မသဒ္ဓါ ကြည်ဖြူ စွုာ အခွင့်ပေးပါသည်။ မိမိစရေးကတဲကပင်..ကလေးများသိစေလိုသော အကြောင်းအရာ သုတကို.ပေးလိုသော စေတနာသာ ရှိသောကြောင့်..မည်မျှ တုန့် ပြန်ခြင်း မပြုဘဲနားလည်စွာ ခွင့်လွှတ် မေတ္တာထားပါသည်။ လိုအပ်သလို ယူသုံးနိုင်ပါသည်။ ရေးသူအမည်သာ တတ်ပေးပါ။
ဤသို့ အလားတူ ကဗျာကို ရေးသူအမည်မတတ်ဘဲ ဘလော့များ အီးမေးများတွင် တင်ပြခြင်းကို အခု တလော တွေ့ရပါသည်။ အထူးသဖြင့် အခံရဆုံးမှာ ကဗျာဆရာကောင်းကင်ကို ဖြစ်ပါသည်။
သူ၏ကဗျာများသည် EMAIL တွင်ပြန့် နှံ့ ကာ ရေးသူအမည် မပါပါ။ ယူသုံးလိုသော ကလေးငယ်များက မသဒ္ဓါ အား လာရောက်ဆက်သွယ်ဖူးပါသည်။ ကိုကောင်းကင်ကို ၏ ကဗျာ ကောင်းသောကြောင့် သုံးလိုသော်လည်း အမည်မပါသောကြောင့် မည်သူရေးသည် သိပါသလားဟု လာလာ မေးကြပါသည်။ မသဒ္ဓါ သိက ရေးသူ နာမည်ပြောနိုင်သော်လည်း မသိသောအခါများတွင်..ကဗျာခေါင်းစဉ် သို့ မဟုတ် စာသားကို Google search အောက်တွင်ရိုက်ကာ ရှာစေပါသည်။
ရေးသူ အမည်မသိပါက အမည် မသိကြောင်း ပွင့်လင်းရိုးသားစွာ ဖော်ပြပေးရန် နှင့် ရေးသူကို သိပါက သတင်းပေးကြပါ ဆိုသော စာတမ်းကို ရိုက်စေသောကြောင့် နောင်တွင် ..သိသူ စာဖတ်သူများမှ လာရောက် ပြင်ဆင်ပေးလေ့ရှိ ကြောင်းတွေ့ ရပါသည်။ အကယ်၍ မှားယွင်းစွာ ဖော်ပြမိ ပါက စာရေးသူအား တောင်းပန်လွှာ.. အသိပေးလွှာ ရေးတတ်သော ကောင်းမြတ် မွန်ရည်သော နိုင်ငံကြီးသားများ အမူအကျင့်ကို ကျင့်သုံးစေပါသည်။
မသဒ္ဓါ ၏ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ သေတမ်းစာ ကဗျာကိ်ု.. နှစ်သက်၍ကူးယူသွားသူများက ရေးသူအမည် မတတ်ဘဲ email များတွင် ဖော်ပြခဲ့ကြရာ..မသဒ္ဓါ ကိုယ်တိုင်ပင် လက်ခံ ရရှိခဲ့ပါသည်။
ဒါ ငါရေးတာကွ ဟု မိမိ ကိုယ်ဖော် မသူတော် လက်မတထောင် ထောင်လုပ်လိုရင်းဆန္ဒ မရှိုသောကြောင့် မသဒ္ဓါ ဘာမျှ ၀င်မပြောဘဲ အေးဆေးစွာနေခဲ့ပါသည်၊ နောက်ဆုံးတွင် ၀ိဝါဒကွဲပြားပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရေးသယောင်ဖြစ်လာသောကြောင့် မိုးမခမှ ကိုရစ်က ၀င်ရောက်ရှင်းလင်းခဲ့ပါသည်။
နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်ကတော့ နအဖ ဘက်တော်သားများ၏ အဆဲခံရခြင်းပါဘဲ။ ဤသည်က ရေးသူ အမည် ဖော်ရခြင်း ၏ နောက်ဆက်တွဲတွေ ဖြစ်ပါသည်။
အခု ဖြစ်သော သားတရားမှာ အခြားမဟုတ်။
မသဒ္ဓါ ၏ ကဗျာ တပုဒ်အား.ရေးသူ အခြားနာမည်တတ်၍ မြတ်လေးငုံ ဆိုသော ဘလော့ မှာတင်ထားကြောင်း သတင်းပေးတဦးက လာပြောပါသည်.။
ရေးသူ ၏အမည်မှာ လွယ်လုံသခင်မ ဟု အမည်တတ်ထားကြောင်းတွေ့ ရပါသည်။ သို့ ဖြစ်၍ မည်သူက လွယ်လုံသခင်မလောဟု ရှာဖွေသော အခါ...လွယ်လုံသခင်မ ၏ဘလော့တွင် ကဗျာကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ဓါတ်ပုံဖြင့်တွဲ၍ ဝေဆာစွာ..( မသဒ္ဓါ ဘလော့ထက်ပင် လှပစွာ တင်ထားပေးကြောင်းတွေ့ ရ၍ ကျေးဇူးတင်ပါသည်)။ သူမက သူမရေးသည်ဟု..သူမအမည် တတ်မထားပါ။ မသဒ္ဓါ ရေးကြောင်း သူမ သိချင်မှ သိမည်ဖြစ်သော် လည်း.. မရိုးသားမှုဖြင့် သူမအမည်ကို မထိုးထားသောကြောင့် ကဗျာခိုးမှု မမည်ပါ။ မသဒ္ဓါ ခွင့်လွှတ်ပါသည်။
ပြဿနာက မြတ်လေးငုံ က စပါသည်။ သူမ အားသိသူက ရေးသူ မှာ ကျမဖြစ်ကြောင်း..သူတဦးမှ သတင်းကောင်း သွားပေးသည်ကို...ရင့်သီးစွာ ငါးစိမ်းသည်လို ရန်တွေ့လိုက်ခြင်းပါ.။ မိကောင်းဖခင်သားသမီး ပီသပါက..မိမိ မသိဘဲ အမှတ်တမဲ့ဖော်ပြသည်ကို လာရောက် သတင်းပေးသူအား ဤသို့မစော်ကားသင့်ပါ။ ကျေးဇူးပင် တင်သင့်ပါသည်။
သတင်းပေးသူက လင့်ပေး၍ အတိအကျ မယုံပါကသွားကြည့်ရန် ပြောသည်ကို.. သူကဘဲ ရန်ထောင်လွှတ် သောကြောင့် မသဒ္ဓါ စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရပါသည်။ ရေးသူ ပိုင်ရှင်နာမည်မှားရေးတာ သိပါရက်နှင့် မပြင်ဆင်ခြင်းမှာ.ရေးသူကို စော်ကားခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ ဤ ကဗျာကို မသဒ္ဓါ ၏ ဖန်တီးရာတွင် အမှားကင်း ရလေအောင် ဗိုလ်ချုပ်၏ အထုပ္ပတ္တိအား အဖန်တလဲ သုံးရက်လေ့လာပြီးမှသာ တပင်တပမ်း ရေးထားရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
သွေးရိုးသားရိုး မသိ၍ ကဗျာကိုယူသုံးလိုခြင်း..အမည်မှားယွင်းမှု ကို မသဒ္ဓါ ခွင့်လွှတ်တတ်သော်လည်း.. သူကိုယ်တိုင် လာရောက် ကြည့်ပြီး ကျမရေးသည်မှန်း သိရက်နဲ့သူမ၏ မှားယွင်းမှုကို. .ယဉ်ကျေးစွာ. တောင်းပန်ခြင်း စကားတခွန်းမှ မဆိုနိုင်သော အတ္တ ။ ငါဘာကောင်ဟေ့ အသားလွတ် လွဲမှားသောမာနတို့ ဖြင့် သတင်းပေးသူကို မောက်မာစွာ ပြန်လည် ရေးသားထားပါသည်။
စေတနာဖြင့် သတင်းပေးသူခမြာ..ပုဆိုးဖင်ပေါက်ဝတ်ထားသူ အ၀ှါပေါ်နေသောကြောင့် အရှက်မရစေရန် စေတနာဖြင့် " လှည့်ဝတ်လိုက်ပါဗျာ...ခင်ဗျားပူဆိုး ဖင်ပေါက်ကြီးနဲ့ ဗျ " ပြောခဲ့သူကို ပုဆိုးဖင်ကွဲနှင့်သူကရှက်ရမ်းရမ်းကာ " ခင်ဗျားအပူပါလား၊ ."လို့ပြန်အော်ဆဲသော အပေါက်ဖြစ်နေလေသတည်း။။။
မသဒ္ဓါ နှလုံးသည်းပွတ်ဖြင့် ဖန်တီးထားရသော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ကဗျာ သည် မသဒ္ဓါ ၏ သားငယ်နှင့် အလားတူပါသည်။
လွယ်လုံသခင်မ က ဤသားငယ်လေးကို ရှင်လောင်းဝတ်စုံ ၀တ်ဆင်ကာ ရှင်ပြုပေးသူနှင့် တုပါသည်။
ဤ ကဗျာကို ကူးယူပြီး မြတ်လေးငုံအား ပေးပို့ သူမှာ..သူတကယ်ဘဲ မသိသောကြောင့် လွယ်လုံသခင်မ ရေးသည်ဟု ကဗျည်းတတ်ခြင်းဖြစ်မည်။ မြတ်လေးငုံက ဖော်ပြသည်။ ဤအထိ ကျမခွင့်လွှတ်၍ ရပါသေးသည်။
ခွင့်လွှတ်၍ မရသောအရာမှာ မိမိ မှားယွင်းကြောင်း သိပါရက်နဲ့ပိုင်ရှင်ရှိမှန်း သိပါရက် တောင်းပန်စကားမဆို.. ဇွတ်အတင်း သူတွင် တာဝန်မရှိဟု ပေးသူရှိ၍တင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဖင်ပိတ်ညင်းခြင်းဖြစ်သည်။
ပေးသူ ကပေးသော်လည်း မိမိဘလောက်တွင်တင်သောအခါ..သေချာစွာစီစစ်ခြင်း အသိဥာဏ်မရှိပါပြီလော။ ဤ သို့ ဆိုပါက သတင်းသမားလုပ်ပြီး သတင်းအမှား အမှန် မသိတင်မည်လော။. ယုံကြည်စွာဖတ်မိသူ အရူုးဖြစ် ရမည်လော။ ကျော်ဆန်းသာ သိက..ပြည်ပဘလော့ဂါများ ညာနေသည် ဟု အလှောင်ခံရမည် သေချာလောက် ပါသည်။ မည်သို့credit ပေးရမည်ပင် မသိပါ။
မိမိ် အမှားကို မမြင်၍လော..အတ္တတရား များပြား၍လော. ခိုးရာပါပစ္စည်းနှင့် လက်ပူးလက်ကြပ် မိနေသည် ကို.ပြန် ရန်စောင်နေသောကြောင့် ဤမျှ စည်းကမ်းမဲ့ အကျင့်တရား စာရိတ္တမဲ့သောသူ လက်တွင်..မသဒ္ဓါ ၏ကဗျာ ကို မထားခဲ့နိုင်ပါ.
ကဗျာသည် ကောင်းသည်ဖြစ်စေ..မကောင်းသည်ဖြစ်စေ..ရေးသူ၏ သိက္ခာကို စာနာ နားလည်သင့်ပေသည်။ သူ မည်သူ ဘယ်ဝါ မသဒ္ဓါ မသိ.. ဘယ်အဆင့်အတန်းက လာသည်လည်း. ဂရုလည်းမစိုက်။ အပွေးမြင်လျှင် အပင်သိပါသည်. လေသံမြင်..အဆန်ရှိမရှိ သိလောက် ပါသည်။
မသဒ္ဓါ သိသည်မှာ သူသည် အတ္တကြီးစွာ...မောက်မာသော သားခိုး ဘီလူးမသာဖြစ်၏။
သူ၏ သားပါဟု သူလက်ထဲတွင်တွေ့ သော သူများ၏ ပစ္စည်းမှာ သူခိုးသည်မဟုတ် တစုံတယောက် ပေးသည် ဟုလွှဲချ၏။
မည်သို့ ပင်ဖြစ်စေ အမှုသွားအမှုလာတွင် ခိုးသည် မခိုးသည် ထက်..လက်ထဲတွင် ပျောက်ဆုံးသောပစ္စည်း. .လက်ပူး လက်ကြပ်မိခြင်းသည်..အမှုမြောက်ပြီဖြစ်၏။
ဤနေရာတွင်.စာဖတ်သူတို့ သည် မဟော်သဓာ သူ့ ခမိန်ဖြစ်၏။ ကျမ၏ သားငယ် အား ဘီလူးမလက်တော့ ကျမ ၀ကွက် မအပ်နိုင်လေပြီ...
မင်းမဟော်..အသင်သည်...သားတရားကို မည်သို့ စီရင်မည်နည်း?
ဘယ်သူမှား၍ မည်သူ မှန်သနည်း။?
မိမိ၏အမှားကိုမှ..သုံးသပ်ပြီး အမှန်ကို မဖော်ပြရဲသော နိုင်ငံရေးသမားဘလော့ဂါဆိုသူ ၏ သတင်းသည် တန်ဖိုး ရှိပါမည်လော..မည်မျှ ယုံကြည်ရမည်လော...
အမှားကို သိက္ခာရှိရှိ..လာရောက် တောင်းပန်ခြင်းမရှိပါက..မသဒ္ဓါ ကဗျာ အား ဖြုတ်ပေးပါရန် တောင်းဆိုသည်။
နာမည်သည် လူ၏ သတင်းဖြစ်ပါသည်။
အလကားရသော ဘလော့ရေးသူအချင်းချင်း...ဘာမှမဟုတ်သော မြန်မာပြည် မှ ပြည်ပရောက် ဒုက္ခရောက်နေကြသူ အချင်းချင်း..အရူးတမူး ပိုမရှူချင်ပါနှင့် ..ဘလော့ရေးတတ်ရုံ လူဖြစ်လေပြီ..စိတ်ကူးမယဉ်ပါနှင့်။
လူတဦးချင်း၏ သိက္ခာ သမာဓိ ဖန်တီးနိုင်မှူကို အချင်းချင်းလေးစားတတ်ရန် မသဒ္ဓါ မှ မြတ်လေးငုံအား စေတနာဖြင့်ရေးပါသည်။
ရိုးသားမှူစေတနာသာ လူ၏ သိက္ခာဖြစ်သည်။
လူ ကိုလူလိုလေးစားတတ်ခြင်းသည် လူဘောင်လောကစည်းမျဉ်းဖြစ်ပါသည်။
ကျမ၏ ကဗျာကို မူရင်းပိုင်ရှင် စာရေးသူအား အမှုမထား မောက်မာစော်ကားသူ၏ ဘလော့တွင်..လုံးဝ တင်ခွင့်မပေးနိုင်ပါ။
ကျမ ဘလော့ကို သေသေချာချာကြည့်ပါ copy Rights မှတ်ပုံတင်ထားပါသည်။ မသဒ္ဓါ ၏ မူရင်းကဗျာကို ဒီမှာဖတ်ပါ
အောက်ပါ PDF က မြတ်လေးငုံ ရင့်သည်းစွာ ရေးထားတာပါ။ သက်သေပြပါတယ်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 12:19 PM2comments Links to this post
မုန်တိုင်းထဲက တော၏ ပုံပြင်
သားရဲ့ အော်သံက.. အမိုးရေ ပြေးပြေး...
၀ါးရွက်ရဲ့ ကြမ်းလျှတဲ့ အရသာ.
ဒီလိုနဲ့ ကျမဘ၀ ..အနှစ် ၆၀ တောင်ရပြီ..
သား ၃ယောက် သမီးတစ်ယောက်
မြေး ၁၀ယောက် ရှိပြီ..
ပြေးမဲ့ ဘေးက လွတ်ဘဲမလွတ်နိုင်ဘူး..
မစွန့် နိုင်လို့ ပါ..
အမိုးငယ်ငယ်က လိုဘဲ ဝေ့
အမိုးတောင် အဖွားကြီိးမို့ ကံကောင်းတာလား..
အော်...ဒီ ဝဋ်တွေ ခုထိမကျွတ်သေးဖူး..
ဟင်းမပါ ဗြောင်တမင်း စားရတယ်..
မဲလ ဆီ ခရီးကြမ်း..မြေးတွေနဲ့ အတူလှမ်း..
နို့ စို့ မြေးလေး..အမေနို့ မေးတဲ့အခါ..
အဖွားနဲ့နို့ ပိန်ကပ် ပါးစပ်ထဲတတ်တော့
နို့ ရည်မထွက်..ကုန်းကိုက်တဲ့ သွားချက်..
မငိုနဲ့ရှူးတိုးတိုး..
ဒါကရင်တွေ ရဲ့ ဘ၀ဘဲ
နို့ စို့ ကလေး..အစာမရ..
မဲလ အရောက်မှ အသက်ရှူချောင်တယ်
အမိုးအသက် ခြောက်ဆဲ့ ခြောက်။
ငိုချင်သလို ငို..ရယ်ချင်သလို ရယ်
သို့ ပေတည့်လား..ညတိုင်း အိမ်မက်..
မသဒ္ဓါ (၄။ ၈။၂၀၁၀)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 8:33 AM 1 comments Links to this post
ရွှေဝါရောင်ဝတ်စုံလေး နဲ့ အမေ...
ပါတီ ပျက်ချင် ပျက်..
ကျမတို့ သွေး မပျက်ဖူး..
ပါတီရဲ့ မည်နာမက မညစ်ဖူး..
ညစ်တာ ကျမတို့ မဟုတ်ဘူး..
ပိတောက်ပန်းတွေနဲ့ နိူးထမဲ့ ၀ိညာဉ်
အမေရယ် အလှဆုံးသာ ပြုံးပြ..
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 7:48 AM0comments Links to this post
ရေဓါတ် ၅၅% မှ ၇၅% နဲ့ ဖွဲ့ စည်း လူသား၏ ခန္ဓာအတွက်
PH ဆဲဗင်း..H2O ဘ၀..
လူတဦးရဲ့ တနေ့ တာ လိုအပ်ရေက တစ်ဂါလန်ဝက်
မနက်ဖြန် အတွက် အသက်ဆက် စရာ။
ရေဆိုတာ တပိဿာရှိရင် သန့်တယ် ဆိုရိုးရှိပေမဲ့
ရော့အင့် သောက်ဖို့ ပေးသော်လည်း..
ထုံးကျောက်၊စိန်၊ ခဲ ၊ benzene ဓါတ်ကဲ
အထက်လန် အောက်လျှော၊ ဝမ်းပျက်ဝမ်းကိုက်
အသည်းယောင် A အသားဝါရောဂါ
ကမ္ဘာပေါ် ၁၅ စက္ကန့် လျှင် ကလေးတယောက်သေနှုံး..
ကျော်စောခြင်း၊ မွတ်သိပ်ခြင်းမှ ကင်းရှင်း
ရေကို သန့် စင်ကြိုချက်ကြ
ရေညစ်ရေကန် သန့် ရှင်းကြ
မိုးရေချိုသန့်သိုလှောင်ကြ
မိလ္လာစံနစ်ကျ စွန့် ပစ်ကြ
ဒါ ကျမတိ်ု့သားချင်းတွေ..
ရေတွင်း ရေကန် ဆောက်.
ကြင်နာသနား.. စေတနာနဲ့ 
ရေချမ်းစင် မြန်မာရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု..
(ရှေးဟောင်းဓါတ်ပုံကို...http://dhammaganga.blogspot.com/2009_10_01_archive.html မှ ရယူပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ။ )
ဒေသ တချို့မှာ ရေရှည် သောက်ရင် အဆိပ်သင့် နိုင်တဲ့ ရေ တွေ့ရှိ
ဧရာဝတီ တိုင်းနဲ့ ပဲခူးတိုင်းက ဒေသ တချို့ရဲ့ လက်တူး ရေတွင်းက ထွက်လာတဲ့ ရေတွေမှာ ရေရှည် သောက်ရင် အဆိပ်သင့် စေနိုင်မယ့် အာဆင်းနစ် (Arsenic) ဒြပ် သတ္တု ပစ္စည်း ပါဝင်မှု များ နေတာ တွေ့ရတယ်လို့ လုပ်ငန်းခွင် ကျန်းမာရေး ဌာနက သိရ ပါတယ်။ ဧရာဝတီတိုင်း မြောက် ဘက်ခြမ်းက ဟင်္သာတ၊ ကျုံပျော်၊ ဇလွန်၊ သာပေါင်း၊ ပန်းတနော် နဲ့ ပဲခူးတိုင်းက ဝေါ၊ ဒိုက်ဦး၊ ညောင်လေးပင်၊ ကျော်တံခါး၊ ဖြူးစတဲ့ မြို့နယ် တွေမှာ တွေ့ရ တာပါ။ သည် မြို့နယ်တွေ ထဲက အာဆင်းနစ် ပါဝင်မှု များတဲ့ ရေကို သောက်နေတဲ့ လူပေါင်း ၂၁,၅၄၆ ဦးကို စစ်ဆေးတဲ့ အခါ အဆိပ်သင့် နေတယ်လို့ သံသယ ဖြစ်ဖွယ် လူနာ ခုနစ်ဦး တွေ့ရ တယ်လို့ မတ်လ ၁၇ ရက်နေ့က ပြု လုပ်တဲ့ ကမ္ဘာ့ရေ သယံ ဇာတနေ့ အကြို ပွဲမှာ လုပ်ငန်းခွင့် ကျန်းမာရေး ဌာန၊ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာ သန်းထွဋ်က ပြောပါတယ်။
အာဆင်းနစ်ပါတဲ့ ရေသောက်မိပြီး အဆိပ်သင့် ခံရ တယ်လို့ ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ရှိတဲ့လူ၊ ရေရှည် သောက်မိပြီး အဆိပ်သင့် နေပြီလို့ သံသယ ဖြစ်ဖွယ်ကောင်း တဲ့လူနဲ့ သေချာပေါက် အဆိပ်သင့် နေတဲ့ လူဆိုပြီး ကမ္ဘာ့ ကျန်းမာရေး အဖွဲ့က အဆင့် သုံးဆင့် ခွဲပြီး သတ်မှတ်တယ်။ သတ်မှတ်ချက် အရ မြန်မာ နိုင်ငံမှာ တွေ့ရှိထားတဲ့ လူခုနစ်ဦး ထဲက နှစ်ဦးသာ အဆိပ်သင့် ခံရတဲ့ လူနာ အဖြစ် သတ်မှတ် ခံရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အာဆင်းနစ် ပါဝင်မှု များတဲ့ ရေကို ရေရှည် သောက်မိရင် ပထမဆုံး အရေပြားပေါ်မှာ ညှင်းနဲ့ ဆင်တူတဲ့ မှိုပွင့်တွေ ထွက်လာတယ်။ နောက်ပိုင်း လက်ဖ၀ါး၊ ခြေဖ၀ါးမှာ အသားမာတက် ထူပိန်း လာတဲ့ အဆင့်ကနေ နောက်ဆုံး ကိုယ်တွင်း အင်္ဂါ ကလီစာ မှာ ကင်ဆာ ဖြစ်တဲ့ ဝေဒနာ ခံစားရတယ်လို့ ဒေါက်တာ သန်းထွဋ်က ပြောပါတယ်။
နုန်းတင် မြေနု မြေအောက်လွှာ ပေါ်မှာ အခြေပြု ထားတဲ့မြို့(ဥပမာ မြစ်ဝ ကျွန်းပေါ် လိုဒေသ) ဧရိယာ နဲ့ မြစ်ဝှမ်း ဒေသတွေ၊ မြစ်၊ ချောင်း၊ အင်းအိုင် တွေရဲ့ ဘေးက မြေပြန့် လွင်ပြင် ဒေသတွေ စတဲ့ နေရာ မျိုးတွေက သောက်သုံးရေ (အ၀ီစိ ရေတွင်းက ထွက်လာတဲ့ရေ) ထဲမှာ အာဆင်းနစ် ပါဝင်နှုန်း များနိုင် တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ် ၄၀ ခန့်က မြစ်ရေ၊ ချောင်းရေ၊ ကန်ရေ မသောက်ဖို့ ပညာပေး တားမြစ်တယ်။ အကာ အကွယ် မဲ့တာ၊ အညစ် အကြေး စွန့်ပစ်တာ တွေကြောင့် အထက်လန် အောက်လျှော၊ ၀မ်းလျှော၊ ၀မ်းပျက်နဲ့ အူရောင် ငန်းဖျား ရောဂါတွေ ဖြစ်နိုင် တာမို့ တားတာပါ။
မြေအောက်က ရေက သန့်လို့ ထုတ်သုံးဖို့ သက်ဆိုင်ရာက ပညာ ပေးတယ်။ သည်နောက်ပိုင်း မြေအောက် ရေထဲမှာ မြေအောင်း နေတဲ့ နှစ်ချို့သတ္တုဓာတ် တွေပါလာပြီး အာဆင်းနစ် အဆိပ်သင့် တာတွေ ဖြစ်လာ ရတယ်လို့ ဒေါက်တာ သန်းထွဋ်က ပြောပါတယ်။ အာဆင်းနစ် ပါဝင်မှုများတဲ့ ရေကို ရေချိုး၊ အ၀တ်လျှော်၊ ဆေးကြောနိုင်ပြီး ကျိုချက်သောက်တာ၊ ထမင်းဟင်းချက်တဲ့ အထဲမှာ သုံးတာ တွေက လူကို အဆိပ်သင့် နိုင်ပါတယ်။
အာဆင်းနစ် ပါတဲ့ ရေကို ၄၈ နာရီ ည သိပ်ပြီး အပေါ် တစ်ဝက် သောက်ရေ အဖြစ် သုံး နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင် ကျန်းမာရေး ဌာနက တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ် ၁၂ ခု၊ မြို့နယ် ပေါင်းများစွာ ကွင်းဆင်းပြီး သောက်သုံး ရေထဲမှာ အာဆင်းနစ်ပါ၊ မပါ စစ်ဆေး ပေးနတယ်။ သောက်ရေထဲမှာ အာဆင်းနစ် ပါဝင်မှု များတဲ့ ရွာတွေ၊ ရေအရင်း အမြစ်တွေ တွေ့ရင်သည် ရေကို ဒသခံ ပြည်သူတွေ ဆက် မသောက်ဖို့ အသိ ပေးတယ်။ သည်နောက်ပိုင်း အာဆင်း နစ်မပါတဲ့ သောက်သုံး ရေရအောင် သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ တွေနဲ့ ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက် ပေးတယ်လို့ သိ ရတယ်။
ကွင်းဆင်း စစ်ဆေး ထားတဲ့ မြို့နယ်ပေါင်း ၆၁ မြို့နယ်ရှိပြီး မကြာခင်မှာ နောက်ငါး မြို့နယ် (စဉ့်ကန်၊ မြစ်သား၊ အူမဲ၊ သတက်ဦး နဲ့ မြောင်းစသည့်) ထက်တိုး စစ်မှာပါ။ ရွာနဲ့ ရပ်ကွက်ပေါင်း ၇၃၀၀ ကျော် စစ်ဆေး ထားပြီး စမ်းသပ် ထားတဲ့ ရေ နမူနာပေါင်း (ဂါလန် မဟုတ်ပါ) ၂၃၆၄၂၃ ရှိပြီ ဖြစ်တယ်လို့ လုပ်ငန်းခွငလုပ်ငန်းခွင့် ကျန်းမာရေး ဌာနမှ သိရကြောင်း ၂၀၁၀ ခုနှစ် မတ်လ ၂၆ရက်နေ့ထုတ် မော်ဒန် သတင်း ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြ ထားသည်။
ဆလိုင်းပီပီး | စနေနေ့၊ မေလ ၀၂ ရက် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ၁၁ နာရီ ၃၇ မိနစ် .
နယူးဒေလီ (မဇ္ဈိမ)။ ။ လတ်တလော သောက်ရေရှားပါးမှု ပြဿနာသည် နာဂစ် ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်း ဒဏ်ခံခဲ့ရသော မြန်မာပြည် မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသများတွင် အရေးတကြီး အာရုံစိုက် ဖြေရှင်းရမည့် အဓိက စိန်ခေါ်မှုတရပ် ဖြစ်သည်ဟု ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သားများက ပြောသည်။
“ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသက ပင်လယ်နဲ့နီးတဲ့ ဒေသတချို့မှာ ကြုံနေရတဲ့ သောက်ရေရှားပါးမှုကို ချက်ချင်းဖြေရှင်းဘို့ လိုတယ်” ဟု မြန်မာ ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သားတဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ယမန်နှစ် မေလ ၂ ရက်နှင့် ၃ ရက်နေ့များက တိုက်ခတ်ခဲ့သော နာဂစ် ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသရှိ နေရာအများအပြား ဆားငံရေ ဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့သည်။ ဤမုန်တိုင်းကြောင့် လူပေါင်း ၁၄၀၀၀၀ သေဆုံးခဲ့ပြီး၊ လူပေါင်း ၂.၄ သန်းခန့် အပြင်းအထန် မုန်တိုင်းဒဏ် ခံခဲ့ရသည်။
ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ပြီးသည့်အခါ သောက်ရေရရှိရာ ရေအရင်းအမြစ်များဖြစ်သော ရေတွင်းရေကန်များတွင် တင်ကျန်ခဲ့သော အပျက်အစီးများကို ကောင်းစွာ မဖယ်ရှားရသေးဘဲ အဆိုပါ ရေကန်များမှာ ဆားငံရေများ ဝင်ရောက်ခြင်းလည်း ခံခဲ့ရသည်။
“ဒီလို အကျိုးဆက်တွေကြောင့် ဧရာဝတီတိုင်းက ပင်လယ်နဲ့ နီးတဲ့ဒေသတွေမှာ လတ်တလော သောက်သုံးရေ ပြတ်လပ်မှုနဲ့ ကြုံနေရတယ်” ဟု မြန်မာကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သားက ပြောသည်။
အဆိုးဝါးဆုံး ရင်ဆိုင်နေရသော ဒေသများမှာ ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်တောင်ပိုင်း လပွတ္တာမြို့နယ်ရှိ ပြင်ခရိုင်ကျေးရွာ အုပ်စုအတွင်းမှ ကျေးရွာများ ဖြစ်သည်။
ဤသောက်ရေ ရှားပါးမှု ပြဿနာ စိန်ခေါ်မှုသည် ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ပိုဆိုးလာသည်ဟု World Vision Asia Pacific အဖွဲ့၏ ဒေသဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ရေး အကြံပေးအရာရှိ ဂျိမ်းအိစ် (James East) ကလည်း ဤအတာအတွင်း ပြောဆိုလိုက်ပါသည်။
“မုန်တိုင်း တိုက်ပြီးတဲ့အခါ ချက်ချင်း ရင်ဆိုင်ရတဲ့ စိန်ခေါ်မှုကြီးက ရေမလုံလောက်တဲ့ ကိစ္စဘဲ၊ ခု ခြောက်သွေ့ရာသီမှာ ပိုတောင်ဆိုးလာတယ်” ဟု James East က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
World Vision အပါအဝင် နိုင်ငံတကာအန်ဂျီအို (INGOs) များက မုန်တိုင်းဒဏ်ခံ ဒေသများရှိ ဒုက္ခဒဏ်ခံနိုင်စွမ်း အားမရှိသော ကျေးရွာသားများကို သောက်ရေ တိုးတက်ရရှိရေးအတွက် အကူအညီများ ပေးအပ်ခဲ့သည်ဟု ဂျိမ်းစ် က ပြောသည်။
“ရေကန်တွေထဲက အပျက်အစီး အမှိုက်သရိုက်တွေ ရှင်းပေးတယ်၊ ရေသန့်စက်တွေ တပ်ပေးတယ်၊ မိလ္လာစနစ်တွေ လုပ်ပေးတယ်၊ ကျန်းမာရေး သန့်ရှင်းရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သင်တန်းတွေကို World Visioin လို အန်ဂျီအိုတွေက ပေးတယ်၊ ဒါတွေလုပ်ပေးလို့ ရေရရှိမှု ပိုလာတယ်” ဟု James East က ပြောသည်။
အခြား ဒေသခံကယ်ဆယ်ရေး လုပ်သားတဦးကလည်း သူတို့အနေနှင့်လည်း ရေသန့်ဘူးများ ဝေပေးခြင်း၊ ပြည်တွင်းဖြစ် စဉ့်အိုးလို ပလပ်စတစ် ရေပုံးလို ရေသိုလှောင်နိုင်သော ပစ္စည်းများပေးခြင်း၊ စသည်တို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် လာမည့် မိုးရာသီတွင် သောက်ရေများ သိုလှောင်ထားနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
“သောက်ရေဝေပေးတာက ၂ ရက် ၃ ရက်ဘဲခံမှာ။ သောက်ရေနဲ့ တခြား ကူညီနိုင်င်တာတွေ ကူညီနေတာက ပြဿနာကို ခုလောလောဆယ်ဘဲ ဖြေရှင်းပေးနိုင်တာ” ဟု သူက ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် သောက်ရေ ရှားပါးမှု ပြဿနာကို ကာကွယ်နိုင်ရန် ရေရှည် အဖြေတရပ် လိုအပ်နေကြောင်း ဖြင့် World Visioin မှ James East က ပြောပါသည်။ “ခြောက်သွေ့ရာသီမှာ ရေပြတ်လပ်မှုကို ရှောင်ရှားနိုင်ဘို့အတွက် ရေရှည် ဖြေရှင်းနည်းတွေဖြစ်တဲ့ ရေသန့်တဲ့ရေစစ်တွေ မိသားစုတွေကို ပေးတာ၊ သင့်တော်တဲ့ နေရာတွေမှာ ရေတွင်းတွေ တူးပေးတာ ဆိုတာတွေက အရေးကြီးတယ်” ဟု သူက ဆက်လက် ပြောဆိုခဲ့သည်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 5:12 PM0comments Links to this post
သမီးလေးအသက် သုံးနှစ်တင်းတင်း.ပြည့်တဲ့နေ့ 
မိဘတွေ ဘယ်သူသမီးများမေ့ နေမလား..
သံတိုင်တွေ ကြားထဲက ကျမ..
သမီးရယ်..လွတ်လပ်မှ ပြန်တွေ့ တာပေါ့..
သမီးတို့ အနာဂတ်အရောင်ခြယ်နိုင်ဖို့ 
အမေနဲ့ အဖေ..လမ်းဖောက်ဖို့ ကတာဝန်..
အဖေ..အမေ မျက်နှာကို မတွေ့ မမြင်ဖူး..
လွတ်လပ်ခြင်း ဆုံးရှုံးရတဲ့ လူဘ၀ရယ်
အမေနဲ့ အဖေ့ ဘ၀ကို ကူနားလည်…
ဘာတွေ ချွဲတတ်..ကြားလို မြင်လို..
တွေ့ ချင်လိုက်တာ သမီးရယ်..
အမေရယ်..ကျမ သမီးမျက်နှာ မြင်လိုလှပေမဲ့
သံတိုင်တွေ ကြားတော့ ခေါ်မလာခဲ့ပါနဲ့ ..
ကျမ ကို အမြင်တမျိုးနဲ့သမီး.မြင်မှာ..
အမေကို ရာဇ၀တ်သားလို့ မျက်လုံးစိမ်းနဲ့ ကြည့်မှာ..
ရင်ကဖြစ်တဲ့ နို့ ချိုတောင် သောက်စို့ ခွင့်မရ..
အပြင်ဘက်က သမီးလေးရဲ့ ဘ၀.
အဖေနဲ့အမေ တနေ့ အိမ်အပြန်လမ်း..
အမွှေးသားနဲ့သမီးကြို..
မသဒ္ဓါ ( ၄။၁။၂၀၁၀)
မိဘနှစ်ပါးနှင့် ရှင်ကွဲ ခွဲခံထားရတဲ့ ကိုဂျင်မီ (ကိုကျော်မင်းယု)နဲ့နီလာသိမ်းတို့ ၏ သမီးလေး ဖြူနေခြည်မင်းယုရဲ့၃နှစ်မြောက် မွေးနေ့အတွက်..
မကြာခင်..မေမေ ပြန်လာမှာပါ သမီးငယ်..
မေမေ ပြန်လာရင် နိူ အဝပြန်စို့ ..
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 9:26 PM 1 comments Links to this post